4 Iimpawu eziphambili ze-Ice Grippers ze-Winter Hikers
Ukuba uhlala kwindawo enqabileyo kwaye wenze uhambo olubusika olude, ekugqibeleni uya kudingwa iiflogi okanye i-ice grippers. Eminye imifino, awunakukukhupha. Eyona micimbi ye-ice grippers ilula kakhulu, i-compact, ihlale ihlala, kwaye ibaluleke kakhulu kuyo yonke into, ibukhali kwaye ikhuphe ngokwaneleyo ukuluma kwiqhwa kwaye igcine uzinzile.
(Nangona ulapho, hlala ukhumbule ukuba unako ukubeka iisokisi zakho - kwinqanaba elithile - ukunceda ukugcina iinyawo zakho zifudumala. Ukuba unayo, ungagqiba ngeenyawo ezibandayo .)
I-Kahtoola Microspikes ngokuyinqobo iinguqu eziphantsi kwe-crampons ezihambahambayo, zikhutshwe kwi-collar e-stomp ekhompyutheni kunye ne-chain harness eyenza ukuba zikwazi ukuhamba kakuhle zikwazi ukuhamba kwaye zilula kakhulu ukupakisha. Ndabona nabanye abagijimbelayo bembathisa ukuba batyeke ngakumbi emadakeni asetsheni.
I-Trailound ye-Trail Crampon Ultra ibonakala (kwaye ihamba) kakhulu njenge-Microspikes ye-Kahtoola, kodwa iza ne-hook-and-loop strap ekhusela i-elastomer harness endaweni ephezulu kwi-boot yakho, ukuzinzisa iipikhi ngaphezulu. Kuza kunye nekhukhuthi yokuphatha ukugcina i-crampons yakho yendlela yokukhangela iipokheji zamanzi ezingenawo umbane kwipakethi yakho.
Ndasebenzisa ibini elidala laseNorth "All Purpose" (eyaziwa ngokuba yi-Get-A-Grip Advanced) kwiminyaka. Akunjalo njenge-hardcore njenge-Kahtoolas okanye i-Hillsound's trail crampons, kodwa i-carbide studs iyamangala ngokumangalisayo kwiqhwa kunye nekhephu eligqithisiweyo, ihlala ixesha elide, kwaye inokuthi ithathe indawo enkulu ngokulula xa ilala okanye iphule.
Ukuba awukwazi ukuhlawula i-spikes / i-crampons ebiza iindleko ezixabisekileyo okanye abavumelanga ukuba neenxalenye ezimbini zeedolophu kwi-edolophu kunye nomnye umzila, le nto ibhetri efanelekileyo.
Ukuba awufuni ukuhlambalaza kunye neziqhumane ezinqunyulwayo ze-ice, izicathulo ze-Icebug kunye neebhuthi kunye ne-BUGrip - yonke indlela esuka eSweden - i-studs e-retractable ye-steel builds. Ngenxa yokuba iingxowa zingagqityiwanga ngokupheleleyo, ziyakwazi ukunyanzeliswa yedwa xa uhamba kwiindawo ezinzima njengekhonkrithi. Oko kuthetha umonakalo omkhulu kuloo mihlaba enzima, kwaye i-spikes ihlala igugile ixesha elide ukuze ibambe iqhosha kwiqhwa.
Ukuba uyazi ukuba uya kuphuma kwiindawo ezilahlayo, ukulandelelwa kweBUGrip kuhle kakhulu ukuba uhambe uhamba kwiqula elichwayitiweyo. (Ndakhe ndalapho ndakwenza oko!)
Jonga i-Metal Coil
Andiyithandi ibhanti yeqhwa elisebenzisa iipilisi zensimbi zengxube endaweni yeengxowa okanye iipikhi. Kwamava am, loo ngqekembe isenokutsala kwaye islayidi esikhundleni sokubamba kwiqhwa xa uwafuna kakhulu. I-pair of good grippers iza kuhlala iminyaka, ngoko kulungile ukutshala imali kwimodeli eneenkcukacha okanye ezinokugxilongwa-njengokuba ubona apha - okuya kukukhusela ekuweleni nokuzilimaza.
Iiphakheji zokuNakekelwa kweZikolo zeBhodi